lg g5 vs samsung galaxy s7 umda
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-LG G5 vs Samsung Galaxy S7 umda
I-LG G5 vs Samsung Galaxy S7 umda
Kwilizwe lezixhobo ze-Android, i-Samsung kunye ne-LG zezi zigebenga zimbini ezenza ezinye zeemveliso ezaziwayo.
Iifilosofi ze-smartphone zeenkampani zombini zisandula ukwenza utshintsho olukhulu: I-Samsung yenze utshintsho olukhulu kunyaka ophelileyo yoyilo olutsha kwi-Galaxy S6, ngelixa i-LG isenza kulo nyaka nge-LG G5. I-G5 izama ukuzisa into eyahlukileyo kwintengiso evuthiweyo: ifowuni enoyilo lweemodyuli kunye nembonakalo yentsimbi entsha kraca. Ithelekiswa njani nomda weGlass S7 egobile, kwaye ngaba uyilo lweemodyuli luyinto ezisa utshintsho olunentsingiselo?
Ke ngoku, uthini ngenkqubo entsha, yeekhamera ezimbini kwi-G5 enelensi yeekona zayo ezibanzi ezibanzi ze-engile? Ngaba uluncedo okanye uluncedo lokwenene?
Sithelekisa ezimbini zeefowuni ezilungileyo ze-Android okwangoku: i-5.3 & rdquo; G5 nazo zonke iintsimbi zayo kunye neempempe ngokuchasene nokuqheleka ngakumbi kodwa okwangoku, 5.5 & rdquo; Umda weGPS S7. Masibone ukuba yeyiphi eza phezulu.
Umda weGPS S7 unoyilo olumangalisayo: ukudityaniswa ngokuqinileyo kunye nokubonakala komtsalane, ngelixa i-G5 pales ngokuthelekisa.
Umda we-Galaxy S7 uzisa utshintsho oluncinci kuyilo ukusuka kumda we-S6, ukanti siziva ngathi olo tshintsho lincinci belukwindawo elungileyo: umva wokubuyisa luphuculo olukhulu kwabo bangazukubeka tyala kwifowuni, ngelixa amaqhosha omzimba acofa kakhulu kwaye aphendula. Ukubeka ngokulula, umda weGPS S7 kunye nesakhelo sayo sesinyithi kunye nokuqaqamba (kodwa nokubamba ngomnwe) iglasi umva ihlanganiswe kakuhle.
I-LG G5, kwelinye icala, yeyona fowuni iphakamileyo yokuqala yi-LG eyenziwe ngentsimbi. & ldquo, Kulungile, & rdquo; yatsho ikati enomsindo. Asinayo ikati ekrakrayo, kodwa iqokobhe lesinyithi kunye noyilo ngokubanzi lwe-G5 luziva luqhelekile. Siye sabona amaxesha amaninzi iifowuni ezingabizi ezivela eTshayina ezinomzimba wentsimbi onomlinganiswa ongaphezulu. Ngelixa & rsquo; kwakhona kwinqaku elingalunganga, kuya kufuneka siqaphele izikhalazo ezibini ezincinci: icandelo elisezantsi elisuswayo lixhumeke kangangokuba kukho umsantsa obonakalayo phakathi kwawo kunye nomzimba ophambili (hayi owaphula umthetho, kodwa osacaphukisayo), ngelixa imiphetho ye ifowuni ibukhali ngokungeyomfuneko. Phambili ngaphambili, isikrini sithinjiwe sibheke ezantsi nakwicala elingasentla.
I-LG ikwahambisa amaqhosha evolumu aya kwicala, ngelixa amandla / isitshixo sokuhlala sihleli ngasemva kwaye ngoku sidibanisa isithwebuli somnwe.
Ngokobungakanani, i-LG G5 ngokuqinisekileyo iyindlela ebuyela umva ukusuka kumanduleli wayo: i-bezel yayo enkulu ejikeleze isikrini, iyenza ibe nkulu ngokungeyomfuneko kwaye inegalelo kwinkangeleko yomhla othile. Ngapha koko, i-5.3 & rdquo; I-G5 ibanzi kunomphetho we-Galaxy S7!
Okokugqibela, kodwa kungaphelelanga apho: ukhuseleko lwamanzi! Umda weGPS S7 unayo kwaye i-G5 ayinayo. Sithanda ukhuseleko lwamanzi: inokugcina igajethi yakho eneendleko kumaxesha amaninzi kwaye ipholile ukuba nayo nokuba udlala iingoma kwigumbi lokuhlambela (kuya kufuneka uyizame, nzulu!). Ngokobuchwephesha, umda we-S7 unesatifikethi se-IP68, oko kuthetha ukuba kukhuselekile ukuwufaka ukuya kuthi ga kwiinyawo ezi-5 zamanzi anzulu kangangesiqingatha seyure.
5.88 x 2.91 x 0.29 intshi
Umda we-Samsung Galaxy S7
5.94 x 2.86 x 0.3 intshi
Ubukhulu obuyi-150.9 x 72.6 x 7.7 mm
Jonga i-LG G5 epheleleyo ngokuthelekisa ubungakanani be-Samsung Galaxy S7 okanye thelekisa ezinye iifowuni usebenzisa isixhobo soThelekiso soBungakanani.
I 5.3 & rdquo; I-Quad HD kwi-G5 ilungile, kodwa ayilunganga-imibala iyagqitha kwaye ii-angles zokubukela azikho kumgangatho. I 5.5 & rdquo; Iscreen se-AMOLED kumda we-S7 ngumahluko okhoyo: ngemibala emihle kunye nezinto ezininzi zokwenza ngokwezifiso ezikhoyo.
Umahluko ocacileyo phakathi komda we-S7 kunye nomboniso we-G5 yindlela isikrini esimiswe ngayo: i-5.5 & rdquo; Umda we-S7 une-curve encinci kakhulu kumacala omabini, ngelixa i-G5 ithe tyaba.
Ke, kukho ubungakanani: sine-5.5 & rdquo; Umboniso omkhulu we-AMOLED kumda we-S7, ngelixa i-G5 inezinto ezincinci ezincinci, 5.3 & rdquo; Isikrini se-IPS LCD. Zombini zineepaneli ze-Quad HD, zombini zibukhali ngokuxinana kweepikseli ngaphezulu kwe-400ppi, ke awuphumelelanga & rsquo; qaphela nayiphi na imiphetho edibeneyo okanye i-pixelization. Kuya kufuneka, nangona kunjalo, uqaphele umahluko kubuchwephesha besikrini: zombini iifowuni zibonisa inqaku elitsha le-Display-on bonisa ixesha elibonisa ixesha kunye nezaziso eziphosiweyo (kumda we-S7 ungabona ikhalenda kunye nomfanekiso), kodwa ukuphunyezwa yahluke kakhulu. Kwiphepha le-S7, i-screen Esisoloko ikwi-umahluko kakhulu, ibonakala ngokugqibeleleyo kuyo nayiphi na i-engile, ngelixa ikwi-G5 ityhikile kwaye iluncedo kakhulu, njengoko ihlala irsquo; kunzima ukubona ixesha xa ujonge ifowuni idesika yakho ngekona.
Kukho umahluko omkhulu kwindlela yokubonisa imibala emibini. Umboniso weLCD kwi-G5 ungaphezulu xa uthelekiswa nomgangatho wombala we-sRGB phantse yonke imifanekiso kunye neemovie ezenzelwe zona. Amhlophe nawo aluhlaza okwesibhakabhaka kwi-G5, ecaphukisayo. Umda weGPS S7, kwelinye icala, ubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zescreen. Imowudi yesikrini esisiSebenzi esingagungqiyo ikwanyanzeliswa, kodwa ungatshintshela kwimowudi esiSiseko (yiya kuseto> Ukubonisa> Imowudi yescreen ukwenza njalo) ebonisa imibala ehambelana kakuhle ekhangeleka intle. Useto lokuqaqamba oluzenzekelayo kuzo zombini ezi zinto lucimile: i-G5 ngokungaguqukiyo ikhetha useto lwe-dimmer, ngelixa umda we-S7 ungacima kuzo zombini iindlela.
Imilinganiselo yokubonisa kunye nomgangatho
Ukukhanya okuphezulu Ephakamileyo kungcono
Ubuncinci bokuqaqamba(ubusuku) Ezantsi kungcono
Umahluko Ephakamileyo kungcono
Kwi-Delta E rgbcmy Ezantsi kungcono
Delta E ngwevu Ezantsi kungcono
(Egqwesileyo) 1: 2220
Amanani angezantsi amele inani lokuphambuka kwipropathi nganye, eqatshelwe xa umboniso ujongwa kwinqanaba le-45-degree ngokuchasene nokujonga ngokuthe ngqo.
Ukukhanya okuphezulu Ezantsi kungcono
Ubuncinci bokuqaqamba Ezantsi kungcono
Umahluko Ezantsi kungcono
Ubushushu bombala Ezantsi kungcono
IGamma Ezantsi kungcono
Ukuchaneka kokulinganisela ngombala
Itshathi ye-CIE 1931 xy yemibala yetshathi imele iseti (yendawo) yemibala enokuboniswa kwakhona, kunye nendawo yemibala ye-sRGB (unxantathu oqaqambileyo) osebenza njengereferensi. Itshathi ikwabonelela ngokuboniswa komboniso ngokuchaneka kombala. Izikwere ezincinci ezinqamleze imida kanxantathu zizalathiso zemibala eyahlukeneyo, ngelixa amachaphaza amancinci ayimilinganiselo yokwenyani. Ngokufanelekileyo, ichaphaza ngalinye kufuneka libekwe ngaphezulu kwesikwere salo. Ixabiso 'x: CIE31' kunye 'y: CIE31' kwitafile engezantsi kwetshathi ibonisa indawo yomlinganiso ngamnye kwitshathi. 'Y' ibonisa ukukhanya (kwiinithi) zombala ngamnye olinganisiweyo, ngelixa 'iithagethi Y' inqanaba lokukhanya elifunayo. Okokugqibela, '2000E 2000' lixabiso leDelta E yombala olinganisiweyo. Ixabiso le-Delta E elingaphantsi kwe-2 lilungile.
Le milinganiselo yenziwa kusetyenziswa Ibonisa 'isoftware yokulinganisa yeCalMAN.
Itshathi yokuchaneka kombala inika umbono wokuba kufutshane kangakanani umboniso kunye nemilinganiselo yokulinganisa imibala kumaxabiso abo ahambelanayo. Umgca wokuqala ubambe imibala elinganisiweyo (eyiyo), ngelixa umgca wesibini ubambe ireferensi (ekujoliswe kuyo) imibala. Ukusondela kweyona mibala kwezi zijolise kuzo, kungcono.
Itshathi yokuchaneka kwe-Grayscale ibonisa ukuba umboniso unebhalansi emhlophe echanekileyo (ibhalansi phakathi kobomvu, luhlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka) kumanqanaba ahlukeneyo engwevu (ukusuka kumnyama ukuya kokuqaqambileyo). Ukusondela kwemibala eyiyo kwezi zijolise kuzo, kungcono.
Iphepha elilandelayo: Ujongano kunye nokuSebenza
ngelixa ujikeleza kwiskripthi sebash
pes 2017 pro indaleko yebhola ekhatywayo ye-android
Uyisebenzisa kanjani into entsha ye-iPadOS 15 yokwenza izinto ezininzi
Ungayidibanisa njani i-Galaxy Note 10 kwikhompyuter yeWindows-izaziso kunye nemiyalezo kwiPC yakho!
Isivumelwano esimnyama sangoLwesihlanu sithatha i-Samsung Galaxy Watch Active 2 ukuya kwixabiso elingenakubekwa
Eyona ntengiselwano yefowuni yoMvulo yangoMvulo (2020)
Iapile kunye neapos; ii-iPhone kunye ne-iPad zotshintsho kwezorhwebo (ikakhulu) ziindaba ezimnandi
Abasebenzisi beAirPods Pro bakhalaza ukuba uhlaziyo lonakalise eyona nto iphambili kwisixhobo
IMotorola ibuyisa umdla kwiBOGO (thenga enye, fumana simahla)
I-Samsung Galaxy S8 / S8 + kunye neNqaku 8 yohlaziyo yongeza ukujikeleza kwesikrini sasekhaya
IOS 11.3 kulindeleke ukuba ikhutshwe namhlanje, nantsi into entsha ne (apos; uhlaziyo)